Khilaaf soo kala dhexgalay Madaxda ugu sareysa Maamulka degmada Jowhar & masuq maasuq hareeyay – War La Helaa Talo La Helaa
Guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle Ciilow Warsame Faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in masuq maasuq baahsan uu ka jira degmada,islamarkaana lagu takri falayo canshuurtii shacabaka laga qaadayay
badalkii loogu adeegi lahaa.
Mr. Ciiley ayaa sheegay ineysan jirin adeegyo asaasi ah oo shacabka degmada ay helaan,islamarkaana canshuuraha laga qaado ay kala qeybsadaan madaxda ugu sareysa Gobolka Shabeellaha dhexe.
Guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Baareey oo arintaan ka jawaabayay ayaa sheegay in sanadkii 2017-dii isagoo ka duulayo ineysan shacabka Jowhar aysan heysan dhaqaalo ku filan uu joojiyay canshuurtkii laga qaadayay guryaha,taasi badalkeedana laga qaado qidmar yar oo iyagu lagu celiyo,wuxuuna beeniyay eeda kaga timid ku-xigeenkiisa amniga.
Marka laga soot ago hadalada ay isku tuurayaan Madaxda ugu sareysa dalka Jowhar,waxaa xaqiiq ah oo aan la qarin Karin iney jiraan ku takri fal awood iyo mid dhaqaale oo ka jira guud ahaan Gobolka Shabeellaha dhexe,iyadoona la ogyahay in lacagaha canshuuraha iyo jidgooyooyinka lagu qaaday ay shaqsi jeebkooda ku dhacaan.
Mana jirto nidaam maaliyadeed oo shaqeynayo oo uu leeyahay Maamulka Hirshabeelle gaar ahaan Wasaaradda Maaliyadda oo iyadu mas’uul ka ah qaadista lacagaha canshuuraha.
Wararkii ugu danbeeyay weerar xalay lagu qaaday guriga Guddoomiye Jacfar & Khasaaraha ka dhashay